ဟားခါးမြို့ နွယ်ချောင်းဆည်တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်း လယ်မြေပိုင်ရှင်များ လက်မခံ - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»ဟားခါးမြို့ နွယ်ချောင်းဆည်တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်း လယ်မြေပိုင်ရှင်များ လက်မခံ
ဟားခါးမြို့ နွယ်ချောင်းဆည်တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်း လယ်မြေပိုင်ရှင်များ လက်မခံ
By admin on	 August 14, 2020 Headline
By Salai Benezer – ခငျြးပွညျနယျ၏ မွို့တျော ဟားခါးမွို့ ရပေေးဝရေေးအတှကျ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က (Nawi Tidil) နှယျခြောငျးတှငျ ဆညျတညျဆောကျမညျ့ စီမံကိနျးအပျေါ မွပေိုငျရှငျအခြိူ့က လကျမခံသဖွငျ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျထံ ကနျ့ကှကျစာပေးပို့ထားသညျဟု သတငျးရရှိသညျ။
နှယျခြောငျးဆညျ စီမံကိနျးဧရိယာတှငျ လကျရှိ စိုကျပြိုးလုပျကိုငျနသေညျ့ လယျမွဧေက လေးဆယျခနျ့ရှိပွီး ဆညျဆောကျရနျ သဘောမတူသညျ့ မွပေိုငျရှငျအခြို့ စုပေါငျးပွီး နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျထံ ကနျ့ကှကျစာ ပို့ထားသညျဟု လယျပိုငျရှငျတဈဦးဖွဈသညျ့ ဒျေါ ပါရျဟှေးကပွောသညျ။
“ဒီဆညျဆောကျဖို့အတှကျ အစိုးရအနနေဲ့ ကမြတို့ကို လြှျောကွေးပေးမယျလို့တော့ပွောတယျ၊ ကမြတို့ကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက နထေိုငျပွီးတော့ ဝမျးရေးအတှကျလညျး လကျရှိအခြိနျထိ လယျလုပျတဲ့နရော ဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ လြှျောကွေးပေးရငျလညျး လကျခံမှာမဟုတျဘူး၊ ပွီးတော့ သူတို့က သောကျသုံးရအေတှကျလုပျမယျပွောပမေယျ့ နှယျခြောငျး ရကေ သောကျသုံးလို့ရတဲ့အဆငျ့ထိ ရှိတယျလို့မထငျဘူး၊ မွို့ပတျလမျးလုပျဖို့ လမျးဖောကျတော့လညျး နှယျခြောငျးရဲ့ ရအေရငျးအမွဈတှတေျောတျောမြားမြား ပကျြစီးသှားတဲ့အတှကျ ခုဆို မိုးရှာသီမှာတောငျ ရကေနညျးနညျးဘဲ စီးတော့တယျ” ဟု ဒျေါ ပါရျဟှေးကပွောသညျ။
လူဦရေ ၅ သောငျးကြျောရှိသညျ့ ဟားခါးမွို့နယျတှငျ မွို့ပျေါနလေူဦးရသေညျ ၃ သောငျးခှဲခနျ့ရှိပွီး ဆကျလကျတိုးလာဖှယျရှိသညျ့အတှကျ မွို့နပွေညျသူမြား သောကျသုံးရလေုံလုံလောကျလောကျ ရရှိနိုငျရေးအတှကျ နှယျခြောငျးဆညျစီမံကိနျးကို အကောငျအထညျဖျောရခွငျးဖွဈသညျဟု ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ စညျပငျဝနျကွီးဦးစိုးထကျကပွောသညျ။
“မွို့ပျေါမှာက လူဉီးရမြေားလာတယျ နယျကလညျးလာတယျ အခွားဒသေကလညျးလာတယျ၊ လူဉီးရမြေားလာတာမှာ တောငျပျေါဒသေမှာက ရအေခကျအခဲဖွဈတာပေါ့၊ အခုလဲ လူတှကေ ရလေိုတယျဆိုပွီးတော့ အခကျအခဲကိုဘဲပွောနကွေတာ၊ ရရေဖို့အတှကျ ကနျ့ကှကျတာကတြော့လညျး ကနျ့ကှကျနကွေတယျ၊ ကနြျောတို့ကတော့ ဒီကနျလုပျလိုကျရငျ အကြိုးအပွဈ စဉျးစားရငျ အကြိုးတျောတျောမြားမှာပါ” ဟု စညျပငျဝနျကွီး ဉီးစိုးထကျကပွောသညျ။
နှယျခြောငျးဆညျတညျဆောကျရေးစီမံကိနျးကို သုံးနှဈစီမံကိနျးဖွငျ့ ငှကေပျြ ၁၀ ဘီလီယံကြျော အသုံးပွုသှားမညျဖွဈပွီး လကျရှိ ဘဏ်ဍာရေးနှဈတှငျ စီမံကိနျးအစအနဖွေငျ့ ငှကေပျြ ၂ ဘီလီယံ အသုံးပွုထားကွောငျး စညျပငျဝနျကွီး ဉီးစိုးထကျကပွောသညျ။
ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့သညျ ဟားခါးမွို့ရပေေးဝရေေးအတှကျဟုဆိုကာ သီမွဈရလှေောငျတမံစီမံကိနျးကိုလညျး ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈ မှ စတငျကာ တညျဆောကျခဲ့သျောလညျး ယခုအခြိနျထိ အပွညျ့အဝပွီးစီးနိုငျခွငျးမရှိသညျ့အပွငျ ယခုကဲ့သို့ စီမံကိနျးအသဈ ထပျမံဆောငျရှကျမညျ့အပျေါ ဒသေခံအခြို့က ဝဖေနျနကွေသညျ။
နှယျခြောငျးဆညျ တညျဆောကျမညျ့အပျေါ ဟားခါးမွို့ခံ ဆလိုငျးဆနျနှငျးလနျြက “ နှယျခြောငျးရဲ့ ရအေရငျးအမွဈက ဟားခါးမှာနတေဲ့သူဆိုရငျ အကုနျသိတယျ၊ မြားသောအားဖွငျ့ မွို့ထဲကို စီးဆငျးနတေဲ့ ခြောငျးအငယျလေးတှကေ စီးပွီးတော့ နှယျ ခြောငျးမှာ သှားစုတာဖွဈတယျ၊ အဲဒီတော့ မွို့ထဲက အမှိုကျ အညဈအကွေးတှေ အမြားကွီးပါလာနိုငျတယျ၊ ဒါကစဉျးစားစရာတဈခုပေါ့၊ ပွီးတော့ ဒီလိုမြိုးကိစ်စမြိုးက ရှိလရှေိ့ထ မရှိတဲ့ဟာဖွဈတယျ၊ တောငျပျေါ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအမွငျ့ ၆၀၀၀ လောကျမှာ ရစေုထားတာက ဘာတှဆေိုးကြိုးကွုံနိုငျလဲ? ဘေးပတျဝနျးကငျြထိခိုကျနိုငျမလား? ပွညျသူလူထုအတှကျ ဘယျလောကျထိ အသုံးဝငျနိုငျမလဲ? ဟားခါးမွို့အတှကျရော ဆိုးကြိုးရှိနိုငျလားဆိုတဲ့အခကျြတှကေိုလညျး သခြောစဉျးစားပွီးမှ လုပျသငျ့တယျလို့မွငျ့တယျ”ဟု ပွောသညျ။
ဟားခါးမွို့အနီးတှငျ စီးဆငျးနသေညျ့ နှယျခြောငျးတှငျ ဆညျတညျဆောကျရေး စီမံကိနျးကို လှနျခဲ့သညျ့ ၂၀၀၉ ခုနှဈကတညျးက စီစဉျခဲ့ကွသျောလညျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျခွငျးမရှိခဲ့ဘဲ ယခုမှသာ စီမံကိနျးအကောငျအ ထညျဖျောလာကွခွငျးဖွဈသညျ။
By Salai Benezer – ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးအတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က (Nawi Tidil) နွယ်ချောင်းတွင် ဆည်တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းအပေါ် မြေပိုင်ရှင်အချိူ့က လက်မခံသဖြင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ ကန့်ကွက်စာပေးပို့ထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
နွယ်ချောင်းဆည် စီမံကိန်းဧရိယာတွင် လက်ရှိ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေသည့် လယ်မြေဧက လေးဆယ်ခန့်ရှိပြီး ဆည်ဆောက်ရန် သဘောမတူသည့် မြေပိုင်ရှင်အချို့ စုပေါင်းပြီး နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ကန့်ကွက်စာ ပို့ထားသည်ဟု လယ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ် ပါရ်ဟွေးကပြောသည်။
“ဒီဆည်ဆောက်ဖို့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ ကျမတို့ကို လျှော်ကြေးပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်၊ ကျမတို့ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက နေထိုင်ပြီးတော့ ဝမ်းရေးအတွက်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ လယ်လုပ်တဲ့နေရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ လျှော်ကြေးပေးရင်လည်း လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့ သူတို့က သောက်သုံးရေအတွက်လုပ်မယ်ပြောပေမယ့် နွယ်ချောင်း ရေက သောက်သုံးလို့ရတဲ့အဆင့်ထိ ရှိတယ်လို့မထင်ဘူး၊ မြို့ပတ်လမ်းလုပ်ဖို့ လမ်းဖောက်တော့လည်း နွယ်ချောင်းရဲ့ ရေအရင်းအမြစ်တွေတော်တော်များများ ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် ခုဆို မိုးရွာသီမှာတောင် ရေကနည်းနည်းဘဲ စီးတော့တယ်” ဟု ဒေါ် ပါရ်ဟွေးကပြောသည်။
လူဦရေ ၅ သောင်းကျော်ရှိသည့် ဟားခါးမြို့နယ်တွင် မြို့ပေါ်နေလူဦးရေသည် ၃ သောင်းခွဲခန့်ရှိပြီး ဆက်လက်တိုးလာဖွယ်ရှိသည့်အတွက် မြို့နေပြည်သူများ သောက်သုံးရေလုံလုံလောက်လောက် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် နွယ်ချောင်းဆည်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စည်ပင်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောသည်။
“မြို့ပေါ်မှာက လူဉီးရေများလာတယ် နယ်ကလည်းလာတယ် အခြားဒေသကလည်းလာတယ်၊ လူဉီးရေများလာတာမှာ တောင်ပေါ်ဒေသမှာက ရေအခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့၊ အခုလဲ လူတွေက ရေလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ အခက်အခဲကိုဘဲပြောနေကြတာ၊ ရေရဖို့အတွက် ကန့်ကွက်တာကျတော့လည်း ကန့်ကွက်နေကြတယ်၊ ကျနော်တို့ကတော့ ဒီကန်လုပ်လိုက်ရင် အကျိုးအပြစ် စဉ်းစားရင် အကျိုးတော်တော်များမှာပါ” ဟု စည်ပင်ဝန်ကြီး ဉီးစိုးထက်ကပြောသည်။
နွယ်ချောင်းဆည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို သုံးနှစ်စီမံကိန်းဖြင့် ငွေကျပ် ၁၀ ဘီလီယံကျော် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စီမံကိန်းအစအနေဖြင့် ငွေကျပ် ၂ ဘီလီယံ အသုံးပြုထားကြောင်း စည်ပင်ဝန်ကြီး ဉီးစိုးထက်ကပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဟားခါးမြို့ရေပေးဝေရေးအတွက်ဟုဆိုကာ သီမြစ်ရေလှောင်တမံစီမံကိန်းကိုလည်း ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မှ စတင်ကာ တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ အပြည့်အဝပြီးစီးနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ယခုကဲ့သို့ စီမံကိန်းအသစ် ထပ်မံဆောင်ရွက်မည့်အပေါ် ဒေသခံအချို့က ဝေဖန်နေကြသည်။
နွယ်ချောင်းဆည် တည်ဆောက်မည့်အပေါ် ဟားခါးမြို့ခံ ဆလိုင်းဆန်နှင်းလျန်က “ နွယ်ချောင်းရဲ့ ရေအရင်းအမြစ်က ဟားခါးမှာနေတဲ့သူဆိုရင် အကုန်သိတယ်၊ များသောအားဖြင့် မြို့ထဲကို စီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းအငယ်လေးတွေက စီးပြီးတော့ နွယ် ချောင်းမှာ သွားစုတာဖြစ်တယ်၊ အဲဒီတော့ မြို့ထဲက အမှိုက် အညစ်အကြေးတွေ အများကြီးပါလာနိုင်တယ်၊ ဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ့၊ ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးက ရှိလေ့ရှိထ မရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်၊ တောင်ပေါ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် ၆၀၀၀ လောက်မှာ ရေစုထားတာက ဘာတွေဆိုးကျိုးကြုံနိုင်လဲ? ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မလား? ပြည်သူလူထုအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အသုံးဝင်နိုင်မလဲ? ဟားခါးမြို့အတွက်ရော ဆိုးကျိုးရှိနိုင်လားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်း သေချာစဉ်းစားပြီးမှ လုပ်သင့်တယ်လို့မြင့်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ဟားခါးမြို့အနီးတွင် စီးဆင်းနေသည့် နွယ်ချောင်းတွင် ဆည်တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းကို လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက စီစဉ်ခဲ့ကြသော်လည် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ယခုမှသာ စီမံကိန်းအကောင်အ ထည်ဖော်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။